Ammaanka Baledweyne oo la adkeeyay iyo Caleemo Saarka Ugaas Xasan oo bilaabatay (SAWIRRO) – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya Magaalada Baledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan, ayaa sheegaya in Magaaladaasi ay ka bilaabatay Xaflada caleemo saarka Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
Goob aad u qurux badan oo loo diyaariyay xaflada ayeey saaka ka bilaabatay, halkaasi oo laga dhisay aqal Somali dad aad u fara badana ay isugu yimaadeen.
Taliyaha Booliska Magaalada Baledweyne Cali Dhuux Cabdi Mahad Alle, ayaa sheegay inay si weyn u adkeeyeen ammaanka oo ciidamada shaqadooda ay qabsanayaan.
Wuxuu sheegay inaysan jirin qatar amni oo xilligaan walaac ku keeni karta habsami socodka Xaflada Caleemo saarka Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
Taliyaha ayaa intaasi ku daray in ciidamada Booliska goor sii horeysay oo shalay aheyd ay xaqiijiyeen ammaanka goobta ay ka dhaceyso Caleemo saarka.
Wafuud kala duwan ayaa ku sugan Magaalada Baledweyne, kuwaasi oo halkaa u tagay ka qaybgalka Xaflada caleemo saarka Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
Garoonka Kubadda Cagta ee C/kariin Faarax Laqanyo ee Magaalada Baledweyne ayeey ka socotaa Xaflada caleemo saarka Ugaaska.